Ukukhethwa kwamanoveli amahle kakhulu
goqa imenyu yengane
nweba imenyu yengane
Ukufa kukaMurat Idrissi, nguTommy Wieringa
Umbhali waseDashi uTommy Wieringa usifaka endabeni eyiqiniso ngalabo bantwana abalahlekile bekhulu lama-XNUMX. Abantu banoma iyiphi iminyaka befuna ikusasa elinqatshiwe. Umbono wakudala wemingcele njengombhedo wokugcina, lapho umuntu akwazi ukuphika ilungelo loku ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili ze- Charles Bukowski
Uyemukelwa emhlabeni we-Bukowski, umbhali ongahloniphi, umbhali wezincwadi ze-visceral ezisakaza i-bile kuzo zonke izindawo zomphakathi (ngiyaxolisa uma "ngangibuka kakhulu"). Ngaphandle kokusondela kulo ngqondongqondo ngosesho lwe-inthanethi olufana nokuthi «Charles Bukowski imishwana »ongabuyisa ngayo imibono yakho ...
Ukuphela kwesizini, ngu-Ignacio Martínez de Pisón
Phakathi kukaMartínez de Pisón noManuel Vilas kunenkinga yokubhalwa kwemibhalo ngale kokuqondana kokukhiqiza. Kuyinto ebonakala ngathi ingena kuyo kanye imibhalo yezincwadi iye ezikhathweni ezibalulekile ezingavamisile ukubonwa ekulandiseni kwamanje. Yini engikwaziyo, mhlawumbe bekuyinto yokuthunjwa ngeminyaka yama-80s, ...
Umfowethu, ngu-Alfonso Reis Cabral
Izibopho zegazi ezinokuphakama okufanayo esihlahleni somndeni zingagcina zinciphile zize zifike ekuminzeni. I-Cainism ngumyalo wosuku wefa, ukuvelela noma umona osabalele inqobo nje uma umuntu enenkumbulo. Ubuzalwane akusho ngaso sonke isikhathi ukuqonda kanye nama-vibes amahle. ...
3 izincwadi ezihamba phambili zikaJohn Fante
U-Bukowski ugqozi futhi wahlenga sibonga kulo meluleki othile. UJohn Fante usevele unokuthile okuthile kombhali odumile eMelika okwenziwe kwaba nokuphikisana okujulile phakathi nekhulu lamashumi amabili. I-dichotomy phakathi kwesitayela esikhulayo seMelika sempilo echumayo kanye nezithunzi zenhlalo nezepolitiki; phezu…
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaPatricio Pron
Ngegama elikhunjulwa kalula ngomculo wakhe, uPatricio Pron wase-Argentina uhlose ukuba ngumbhali wezethenjwa kuleli khulu lama-XNUMX. Umphathi wendaba esizukulwaneni esivumayo futhi esivundile kulokhu kuhlanganiswa kokulandisa, njengoba kukhonjiswe yi-Argentina yaseSamanta Schweblin noma i-Oscar Sipán ngoba ...
UClaus noLucas, ngu-Agota Kristof
Kwesinye isikhathi izimo zakha itulo lokwakha into eyingqayizivele ngenxa yokuphazamiseka noma ubunzima. Endabeni ka-Agota Kristof konke kwahlangana ukuze angabhali umqulu wamanoveli amathathu ngolimi lwakwamanye amazwe amthola lapho ebalekela iHungary entsha ephethwe ngasese ...
Candela, kaJuan del Val
Ngenoveli yakhe yangaphambilini ethi "Kubukeka sengathi ingamanga" enezimpawu zokuphila (kodwa eziboshwe ngokuphelele empilweni yakhe), uJuan del Val wavusa isiyaluyalu futhi waba namabhamuza emikhakheni ehluke kakhulu, kude kakhulu nemibhalo eqondile. Kepha lokho kungenye udaba lweqiniso, mayelana nobuningi bawo osekuvezwe ngokwanele ...
Le sayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa nokwenza kube ngokwakho ukuzizwisa kwakho. Ulwazi olwengeziwe ku inqubomgomo yethu yekhukhi.